ပါကစ္စတန် အနောက်တောင်ဘက် ဘလူချီစတန်ပြည်နယ်၌ အသေခံ ဗုံးဖောက်ခွဲ၊ ၁၂၈ ဦးသေဆုံး၊ ၁၅ဝ ဒဏ်ရာရရှ? - Yangon Media Group
ပါကစ္စတန် အနောက်တောင်ဘက် ဘလူချီစတန်ပြည်နယ်၌ အသေခံ ဗုံးဖောက်ခွဲ၊ ၁၂၈ ဦးသေဆုံး၊ ၁၅ဝ ဒဏ်ရာရရှ?
ကွတ္တာ၊ ဇူလိုင် ၁၄
ပါကစ္စတန်အနောက်တောင်ပိုင်း ရွေး ကောက်ပွဲအတွက် လူထုစုဝေးပွဲ၌ ဇူလိုင် ၁၃ ရက်က အသေခံဗုံးဖောက်ခွဲမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပွား ခဲ့၍ လူ ၁၂၈ ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး ၁၅ဝ ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု ဘလူချီစတန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီး အဂ္ဂါအိုမာဘင်ကူဇီက ဇူလိုင် ၁၄ ရက် တွင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
ဘလူချီစတန်ပြည်နယ် လွှတ်တော်အ မတ်စီရတ်ရိုင်ဆာနီလည်း သေဆုံးခဲ့ရသည်။ ယင်းပေါက်ကွဲမှုသည် ဇူလိုင် ၂၅ ရက်တွင် ပါကစ္စတန်သို့ ရောက်ရှိလာမည့် ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း နာဝပ်ရှရစ်ဖ်အား ဖမ်းဆီးရန် စိုင်းပြင်းနေသော အစိုးရအရာရှိများနှင့် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအ ပေါ် ကရုဏာသက်သော ပြည်သူများအကြား တင်းမာမှုရှိနေစဉ် ယခု ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ယခု အသေခံ ဗုံးဖောက်ခွဲမှု ကြောင့် လူသေဆုံးရမှုသည် သုံးနှစ် ကျော်ကာလအတွင်း အများဆုံးဖြစ် ပြီး ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း ရွေး ကောက်ပွဲနှင့်ဆက်စပ်၍ တတိယအ ကြိမ် အကြမ်းဖက်ဖောက်ခွဲမှုလည်း ဖြစ် သည်။
ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း နဝပ်ရှရစ်ဖ်အား အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် အစိုးရက မျက်ကွယ်တွင် ထောင် ၁ဝ နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီး ဇူလိုင် ၂၅ ရက် ပါကစ္စတန်သို့ ပြန်အလာတွင် လာဟိုးမြို့လေဆိပ်မှ စောင့်ဆိုင်းဖမ်းဆီးရမည်ဟု ကြေညာထားသည်။ နဝပ်ရှရစ်ဖ်တွင် အပြစ်မရှိဘဲ နိုင်ငံရေးအရ သိက္ခာချခြင်းဟု ယူဆထားသော ၎င်း၏ပါတီဝင်များက နဝပ်ရောက်ရှိလာပါက လေဆိပ်တွင် လူစုလူဝေးဖြင့် ကြိုဆိုရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြသည်။
တာလီဘန်အယ်လ်ခိုင်ဒါ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော အစ္စလမ္မစ်အစွန်းရောက်အဖွဲ့များသည် ပါကစ္စတန်၊ အီရန်နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နယ်စပ်တွင် စုစည်းကာ အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေကြသည်။ ဗဟိုအစိုးရအား ပုံကန်လိုသော ပါကစ္စတန်လူမျိုးစု တစ်စုဖြစ်သည့် သူပုန်များကို လူသူလက်နက် ငွေကြေးများ ထောက်ပံ့ပေးနေကြသည်။ ယခုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအား အိုင်အက်စ်အကြမ်းဖက်များ၏ လက်ချက်ဖြစ်သည်ဟု အာမက်သတင်းဌာနက ထုတ်ဖော်ပြော ဆိုလိုက်သည်။
သမီးဖြစ်သူ၏ နပန်းသမား ဖြစ်ချင်သည့် ဆန္ဒအား Dwayne Johnson သဘောကျနေ
အထက်အယူခံရုံးသို့ တင်ပြထားသည့် အမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကြန့်ကြာမှုမရှိအောင် စနစ်ကို ပြန်လည
သီတင်းကျွတ် ပိတ်ရက် အဝေးပြေး ကားခဈေးတက်